Saffron monkfish ne prawns | Bezzia
Saffron monkfish ine prawns
Nhasi tinokukurudzira kuBezzia kuti ugadzirire a nyore chaizvo hove resipi uye yakakwana kumhemberero dzemangwana: Saffron monkfish ine prawns. Recipe iyo iwe yaunogona zvakare kuwedzera mamwe clams kana mussels kuitira kuti casserole ipararire zvakanyanya.
El saffron monkfish ine prawns Haisi chete resipi yakapusa, asiwo inokurumidza, inokurumidza kwazvo! Hakuzokutorei maminitsi anopfuura 20 kuigadzirira, uko kuchakubvumira kupa ngwariro kuzvimwe zvinhu mukati memangwanani. Hausi kutanga kuifarira here?
Iwe unogona kugadzira iyi resipi nemonkfish asiwo nevamwe hove dzakaita se hake, kungogadzirisa nguva. KuBezzia tinoiwana iri imwe nzira yakanaka kana tine vaenzi. Kutaura zvazviri, patakaona kuti taifanira kutora mapikicha kuti tiratidze mabikirwo acho, vaenzi vedu vakanga vatodya hafu yacho.
8 monkfish nyoro
20 maprawn, akasvunurwa
1 tablespoon yeupfu
1/2 girazi rewaini
Tambo shoma dzesafironi
2 magirazi emuto wehove (unogona kugadzira imwe nemusoro wemonkfish uye mabhomba eprawn)
Pisa mafuta mupoto yakaderera uye sauté garlic imwe nguva.
Painotanga kutora ruvara, sanganisira hupfu uye kubika kweminiti uchisanganisa.
Pashure wedzera waini chena uye rega ideredze kwemaminitsi mashoma.
Ipapo dira muto hove nesafuroni. Sanganisa uye kubika kwemaminitsi mashoma.
Saka, wedzera yakarungwa monkfish fillets nerutivi rweganda kumusoro uye kubika kwemaminitsi mana, uchikurudzira casserole nguva nenguva.
Mushure memaminitsi mana, shandura rapa nyoro uye wedzera prawns. Bika yose kwe 2-3 mamwe maminetsi, uchifambisa casserole sekunge uri kugadzirira cod al pil pil.
Bvisa kupisa uye ushumire snuff yesafuroni nemaprawn anopisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Pescado » Saffron monkfish ine prawns
Makiyi ekudzika hukama
4 podcasts akafarira mukurumbira muna 2021, vawane!